Stats Marketing amin'ny mailaka tokony ho fantatrao | Martech Zone
Stats Marketing amin'ny mailaka tokony ho fantatrao
Alakamisy, May 22, 2014 Douglas Karr
Tsy azoko antoka loatra fa ny statistikan'ny marketing mailaka tokana eto dia ilaina amin'ny marketing amin'ny mailakao, fa ny sasany amin'izy ireo dia tena misongadina amiko:
Vola amin'ny doka amin'ny mailaka Mahagaga fa ambany ary tsy dia ampiasaina firy. Gaga foana aho ao amin'ny bilaoginay fa mivarotra hatrany ny doka lohateny… fa tsy nisy nividy dokam-barotra amin'ny gazety mpivoaka isan'andro sy isan-kerinandro izay mahatratra 75,000 ny isan'ny mpanjifa isan-kerinandro.
Adoption mailaka eo amin'ny tampon'isa, miaraka amin'ny 95% -n'ny mpanjifa manamarina ny mailak'izy ireo farafahakeliny indray mandeha isan'andro! Raha tsy mandefa fandefasan-kafatra ara-potoana ianao hahazoana ny fitazomana, fitazomana ary hampiakarana ny paikadinao ho an'ny mpanjifanao sy ny mpanjifanao… tsy ho azonao izany!
Fampiasana mailaka finday dia miakatra koa! 64% amin'ireo mpanapa-kevitra no mamaky mailaka amin'ny alàlan'ny fitaovana finday. Mora mamaky finday sy mora vakiana ve ireo mailakao? Mbola tohina ihany aho amin'ny isan'ny marika manan-danja izay mandefa mailaka tsy azoko vakiana amin'ny telefaona findaiko. Imbetsaka aho no be atao ka mamafa azy tsotra izao fa tsy miandry mandra-piveriko any amin'ny birao hamaky azy ireo.
Angamba ny metrika manan-danja indrindra amin'ny rehetra dia ny isaky ny $ 1 lany amin'ny paikady marketing amin'ny mailaka, 44.25 $ no fiverenana antonony amin'ny fampiasam-bola amin'ny mailaka marketing. Izany dia fiverenana amin'ny fampiasam-bola izay tsy azo resena amin'ny alàlan'ny fantsom-barotra sy paikady hafa.
Tags: famolavolana mailakamailaka Marketingstatistikan'ny marketing amin'ny mailakampamaky mailakamailaka statistikamailaka findaymailaka mamaly findaymailaka mamaly
Famantarana: mitombo amin'ny alàlan'ny mailaka, lahatsoratra, sosialy ary sweepstakes